Suurtagal ma tahay in jasiirad ay keento oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Awoodda dabaysha, tamarta Haydarooliga
Horumarinta farsamada iyo hal-abuurka berrinkii Tamarta la cusboonaysiin karo waa cabsi badan. Hoos u dhigista kharashyada iyo hagaajinta waxtarka tamarta ayaa ka dhigaysa cusboonaysiin si heer sare ah loogu tartamo suuqyada iyo waddammada waaweyn.
Waxaa lawada ogyahay in tamarta iskeed isu taagto magaalo, dal, iwm. Weli way yara adag tahay sababaha damaanad qaadka sahayda iyo kala duwanaanshaha baahida. Laakiin suurtagal ma tahay in jasiirad ma joogteyn karaa oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo?
1 Jasiiradda Iron
2 Tusaalaha tamarta tusaale ahaan
3 Maxaa khaldan si hadafka 100% dib loo cusboonaysiin karo aan loo gaari karin?
Jasiiradaha Canary waxaan ka helnaa birta, jasiirad awood u yeelan kara ku dhowaad ama gebi ahaanba isku filan oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo. Soo saarista korantada, dabaysha iyo biyuhu waa waxyaalaha ugu muhiimsan iyo gaar ahaan jasiiradda Hierro. Jasiiradda El Hierro waa tan ugu yar Canaries-ka. Maxay tahay sirtaadu inaad awood u yeelan karto naftaada kaliya tamarta la cusboonaysiin karo?
Waxaan ogaanay in jasiiradda Hierro ay ku dhex leedahay nidaam soo saar koronto oo casri ah bartamaha Gorona del Viento kaas oo ku shaqeeya isku darka tamarta beer dabaysha iyo saldhig tamarta korontada laga dhaliyo. Midowgan tamarta la cusboonaysiin karo waxay ku guuleysteen inay keenaan jasiiradda oo dhan bishii Ogosto ilaa 76 saacadood oo isku xigta iyo 493 saacadood oo aan is xigxigin.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo aan helnay rikoodhkaas oo ah in jasiiradda oo dhan la gaarsiiyo 100% tamar la cusboonaysiin karo, haddana waxaan ka helnay diiwaanno hore (laga bilaabo Jannaayo illaa Oktoobar 2016) in keenista tamarta la cusboonaysiin karo loola jeedo. 43% dhammaan baahida korantada ee jasiiradda. Boqolkiiba waa wax aad uga fog awoodda la heli karo.
Tusaalaha tamarta tusaale ahaan
Warshadda tamarta korontada ee 'Gorona hydroelectric' waxaa la furay Juun 27, 2014, khubaro badan oo tamarta ku tiirsan ayaa leh himilooyinkooda, maadaama ay noqon karto moodal tamar fiican inta hartay jasiiradaha Canary. Dhammaan horumarka tikniyoolajiyadda iyo tamarta ee ka dhacaya jasiiradda El Hierro waxay u adeegtaa sidii sariir tijaabo ah iyo tijaabooyin lagu hirgalinayo moodelladaas tamarta ku shaqeeya jasiiradaha kale. Intaa waxaa dheer, daraasado cusub ayaa loo sameeyaa meelahaas oo kaliya dabaysha, biyaha ama hirarka badda laga heli karo sida ugu macquulsan ee tamarta tamarta oo aan la mid ahayn Birta labadaba leh.
Ilaa 1970, El Hierro waxay lahayd oo kaliya magaalooyin dhowr ah oo iftiin leh oo kaliya fiidka ilaa 12 habeenimo. Sannado ka dib, waxay bilaabeen inay naftooda ku biiriyaan tamarta shidaalka, laakiin dhibta fiilooyinka iyo rarka shidaalka ayaa adkeeyay oo qiimaha korontadu wuu kordhay. Taasi waa sababta ay ugu boodboodayaan inay tagaan bixinta saliida shidaalka iyo qiiqa wasakhda leh ee ay kani keenayso oo ay ku ikhtiraaceen tamar nadiif ah oo ka jaban.
Faa'iidada ay El Hierro ka heshay jasiiradaha kale ayaa ah in hawlgalka geedka Gorona uu u oggolaanayo laba nooc oo tamar ah oo la cusboonaysiin karo inay ku shaqeeyaan si is barbar socda: dabaysha iyo biyaha. Hoosudhaca awooda dabaysha ayaa ah inay yara xasilloon tahay maxaa yeelay waxay inta badan kuxirantahay nidaamka dabaysha hadda jirta. Laakiin xasillooni darrada tamarta dabaysha waxaa lagu magdhabaa tamar aan isbedbeddelin oo si fudud loo xakamayn karo maadaama ay tahay haydarooliga. Ku-biirinta tamarta waxay suurtogal ka dhigeysaa in magdhow la siiyo qulqulka dabaysha.
Maxaa khaldan si hadafka 100% dib loo cusboonaysiin karo aan loo gaari karin?
Sidii aan horay u soo sheegay, muddadii u dhexaysay Jannaayo ilaa Oktoobar 2016, kaliya 43% baahida tamarta waxaa daboolay tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Marka hore, waxa fashilmay ayaa ah in haanta biyaha hoose ay leedahay awood ka hooseysa sidii loo qorsheeyay. Malaha, inta lagu gudajiro dhismaha, waa inuu yaraaday cabirkiisa maadaama uusan aheyn ciidda volcanic Waan u adkaysan kari waayey culayskaas badan. Xaqiiqadani waxay hoos u dhigtay awoodda warshadda waana in la ballaadhiyo.
Midda labaad ayaa ah in kastoo awoodda farsamo ee xaruntu dabooli karto boqolleyda dalabaadka aadka u sarreeya, hawlwadeenku ma doonayo inuu qatar galiyo si loo daboolo dalab aad u badan sidaa darteed, haddii uu jiro wax guuldarooyin ah, oo aan laga dhalin dhimista saadka.
Sida aad u aragto, tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ka dhigeysa booskooda adduunka tamarta iyo kordhinta awooda iyo waxtarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » tamarta Haydarooliga » Suurtagal ma tahay in jasiirad la siiyo oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo?
Maqaal wanaagsan Germán, waxaan kula wadaagayaa LinkedIn, waxba lagama oga qoraxda? Habka aan ku xirnaado astaantaada 'LinkedIn profile' aniga ima shaqeynayo, salaan, Víctor
Ujawaab Victor Feito
Victor wanaagsan, aad baad ugu mahadsantahay aqrinta maqaalkayga iyo faallooyinkaaga. Mawduuca tamarta qorraxda, waa inaad ka fikirtaa in si wax ku ool ah loo soo saaro tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' waxay u baahan tahay hektar ballaaran oo dhul ah si loo dhigo qoraxda. Jasiiradda El Hierro waa tan ugu yar Canaries-ka sidaa darteed ma badin karaan wax aad u badan sababo la xiriira dhibaatooyinka meelaha.
Waxaan horeyba u hagaajiyay xiriiriyahayga ku xiran Linkiga. Aad baad ugu mahadsantahay wadaagidaada oo aad iisoo ogeysiisay xiriirka jabay.
Baraf aad u weyn ayaa ka go'an Antarctica